Ithegi: ukukhangela kwangaphakathi | Martech Zone
Ithegi: ukukhangela kwangaphakathi
Xa abathengisi bexoxa ngokwenziwa kwe-e-commerce, bahlala bethetha ngento enye okanye ezimbini kodwa baphoswe ngawo onke amathuba okudala amava awodwa kunye nawokuthenga abo babatyelelayo. Abathengisi abakwi-Intanethi abaphumeze zonke izinto ezi-4- ezinje ngeDisney, i-Uniqlo, iConvers kunye no-O'Neill- babona iziphumo ezothusayo: Iipesenti ezingama-70 zonyuka kuthethathethwano lwabatyeleli be-ecommerce ngama-300% ukwanda kwengeniso kukhangelo ngalunye , ishishini liyasilela
Ukwakha amandla akho okukhangela ngaphakathi atyebileyo, ixesha lokwenyani, kunye nokukhawuleza yiprojekthi. Yongeza kuyo ukukhangela kwejografi, imifanekiso, urhwebo kunye neselfowuni kwaye uphuhlisa iqonga lonke. Besithetha nje kumvelisi ngale ntsasa malunga namandla abo okukhangela kwaye into leyo ifuna ukubhengezwa ngakumbi kwindawo yabo. Akukho sidingo sokwenza eyakho-IAlgolia yinkonzo yokukhangela ebanjwe ngokupheleleyo, efumaneka njenge-REST